बहुदलीय चुनावबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउन सकिँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता थियो । कुनै पार्टीले त्यस्तो चुनावबाट सरकार बनाए वा कोही सांसद बने संशोधनवादी मानिन्थ्यो । त्यस्तालाई शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूले पुँजीवादीको दलालसम्म भन्थे । पुष्पलालले सशस्त्र संघर्षबाट कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै जोड दिएनन्, उनले नेपाली कांग्रेसजस्तो पुँजीवादी पार्टीसँग मिलेर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र त्यसैमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखे ।
जनगणनामा दलितको पहिचान
जनसंख्या के हो ? संख्या, समस्या वा स्रोतको भण्डार ? जनसंख्याबारे कुरा गर्दा हामीले सोध्ने वा विचार गर्ने प्रश्न यिनै हुन् । सन् ७०–८० को दशकसम्म जनसंख्यालाई समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यसैले भारत, चीन, इन्डोनेसिया जस्ता पूर्व तथा दक्षिण एसियाली देशहरू गरिबमा गनिन्थे । तर समयसँगै जनसंख्याको परिभाषा फेरिएको छ ।